Tsy nisy mpihaino hatrany anefa izy ireo ka nanomboka nihanahery vaika ny fitokonana ny alatsinainy teo. Nakaton’ny mpianatra ny scolarité ao amin’ny fakiolten’ny haisoratra sy Institut Confucius raha torak’izany koa ny ao amin’ny scolarité Degmia. Nakaton’izy ireo ihany koa ny vavahadibe, hany ka tsy nisy fiara afaka miditra sy mivoaka intsony tao amin’ny campus nanomboka omaly talata. Leo ny tsy fisian’ny vahaolana matotra hatolotra azy ireo mpianatra raha ny fanazavana azo. Lohalaharana amin’ireny ny fomba fampiharana ny rafitra LMD ataon’ny mpitantana ny oniversite ao Toamasina izay nambaran’izy ireo fa tsy mazava. Tsy mazava koa ny resaka crédit. Takian’ireo mpianatra ny fampiharana compensation générale-n’izy ireo. Tsiahivina moa fa niantso ny amin’ny tokony hialan’ny filohan’ny oniversiten’i Toamasina amin’ny toerany ireto mpianatra mitokona ireto nanomboka omaly. Nanambara kosa anefa itsy voalohany fa ireo mpianatra tsy afa-panadinana ireo mitokona ireo noho izany nandray fanapahan-kevitra ny amin’ny fampiatoana ny fianarana ao Barikadimy ny tenany. Ireo mpianatra kosa tetsy an-daniny nanambara fa hanamafy ny fitokonany. Andrasana izay mety ho tohin’ny raharaha.